> Resource> Naghachi> Olee hazie Corsair Flash Voyager Iweghachite
Enyemaka! Olee Otú M Pụrụ Naghachi Data si Corsair Flash Voyager USB Drive?
My ajụjụ bụ, ọ bụrụ na m formatted m Corsair Flash Voyager 16 GB USB mbanye, otú m nwere ohere iji nweta ihe m formatted data azụ? M pụtara m etinye USB mbanye maka ihe ọ bụla ojiji kemgbe ahụ. Ọtụtụ n'ime m bara uru photos e Ị. Biko ndụmọdụ ya! Daalụ nke ukwuu.
Corsair Flash Voyager mgbake nwere ike ịbụ a karịsịa mfe ọrụ dị ka gị nkọwa: ị na-eji ngwaọrụ kemgbe data furu efu. Nke bụ eziokwu bụ, ị faịlụ na-agaghị na-adịgide adịgide, ha dị nnọọ ibu keerughi gị Corsair Flash Voyager USB mbanye. Site na iji a data mgbake ngwá ọrụ dị ka Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, ị nwere ike effortlessly weghachite data si Corsair Flash Voyager USB mbanye, n'agbanyeghị na data na-efu n'ihi nhichapụ, formatting ma ọ bụ usoro njehie.
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery ugbu a. Na nke a ikpe mbipute i nwere ike ele mbụ aha nke hụrụ data ka ego ma a usoro bụ n'ezie ike inyere gị aka ma ọ bụ.
Igosi Corsair Flash Voyager Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Corsair Flash Voyager USB mbanye na kọmputa gị na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery. Ị ga-ahụ ihe interface na 3 mgbake ụdịdị. Naghachi data si Corsair Flash Voyager USB mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode mbụ.
Cheta na: Ọ bụ isi na gị Corsair Flash Voyager USB mbanye nwere ike ghọtara dị ka a na diski ike na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosipụta niile ike draịva na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa họrọ otu maka gị Corsair Flash Voyager USB mbanye na pịa "Malite iṅomi" ka iṅomi maka furu efu faịlụ.
Rịba ama: "Kwado Deep iṅomi" bụ ezi nhọrọ, ma ọ na-ewe ogologo oge ka iṅomi.
Nzọụkwụ 3. Ugbu a, i nwere ike weghachite data si Corsair Flash Voyager USB mbanye. The hụrụ data gị Corsair Flash Voyager USB mbanye niile ga-depụtara na edemede na ekpe nke window mgbe iṅomi. Ị dị nnọọ mkpa ele faịlụ aha ma ọ bụ preview hu photos elele ma ị chọrọ faịlụ a hụrụ ma ọ bụ ha na-efu ruo mgbe ebighị ebi.
Ahụ, biko họrọ faịlụ na pịa "Naghachi" na nri ala na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Rịba ama: Unu na-natara data gị Corsair Flash Voyager USB mbanye ke mgbake usoro. Ma ọ bụghị data overwritten nwere ike eme eme.
Ihe kacha ụzọ Weghachi Kies ndabere ka iOS 9